Kooxda Real Madrid oo laba rikoodh midna jebisey midna dhigtay! + Sawirro – Gool FM
Real Madrid's Spanish defender Sergio Ramos holds the trophy after winning the UEFA Super Cup football match between Real Madrid and Manchester United on August 8, 2017, at the Philip II Arena in Skopje. / AFP PHOTO / Dimitar DILKOFF (Photo credit should read DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images)
(Skopje) 08 Agoosto 2017 – Kooxda ugu wayn qaaradda Yurub ee Real Madrid ayaa caawa laba rikoodh midna jebisey mid cusubna dhigtay.
Rikoodhka ay jebisey waa in kooxda Real Madrid ay noqotay kooxdii ugu horreeysey tan iyo AC Milan ee wada difaacata Champions Leagues iyo European Super Cup kaddib markii ay 2-1 dirtay Manchester United 2-1.
Rikoodhka 2-aad Kooxda Real Madrid ayaa haatan goolal ka dhalisay 66 ciyaarood oo xiriir ah tartamada oo idil, iyadoo ansixisay 182 gool.
Zinedine Zidane ayaa 6 koob oo ay ku jiraan min laba CL iyo SC oo xiriir ah la hantay Real Madrid oo uu macalin u yahay 582 maalmood.
— Champions League (@ChampionsLeague) 8 augusti 2017
SAWIRRO: Daawo sida ay Real Madrid ugu dabaal degtay Super Cup